Kedụ ka nchịkọta wee nweta ozi ahụ niile? | Martech Zone
N'izu ụka a, m na-atụgharị (dị ka ọ dị na mbụ). Ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na ị mepee Google Analytics wee hụ mmadụ ole na-agụ ndepụta RSS gị? A sị ka e kwuwe, ndị a ka na-aga eleta saịtị gị na ọdịnaya gị, ọ bụghị ya? N'ezie, nsogbu bụ na faili RSS anaghị ekwe ka koodu ga-egbu mgbe ọdịnaya gị mepere (ụdị). Ibe weebụ gị na-eme, agbanyeghị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụtakwu banyere nchịkọta weebụ, aga m akwado otu akwụkwọ na otu akwụkwọ naanị, Avinash Kaushik si akwụkwọ, Nchịkọta Weebụ otu Oge Awa. Avinash kọwara nke ọma ihe kpatara anyị ji si na sava-n'akụkụ nchịkọta gaa ahịa-n'akụkụ nchịkọta yana nsogbu dị iche iche na nke ọ bụla.
Nke a bụ ihe atụ nke arịrịọ onyonyo na mgbanwe mgbanwe querystring:
Agbalịrị m ịgbakọta nke mgbanwe niile nke querystring site na nyocha ụyọkọ dị iche iche weebụsaịtị:
utmac = “Nọmba Akaụntụ”
utmcc = “Kuki”
utmdt = “Peeji Mbụ”
utmfl = “Flash ụdị”
utmhn = “Rịọ aha nnabata”
utmn = “Nọmba Random - mepụtara maka nke ọ bụla __utm.gif kụrụ ma jiri gbochie caching nke gif hit”
utmp = “Peeji - arịrịọ na peeji nke njụ-ajụjụ”
utmr = “Na-ezo aka na isi mmalite (referral url | - | 0)”
utmsc = "Agba agba"
utmsr = "Mkpebi ihuenyo"
utmt = "ofdị .gif kụrụ (tran | ihe | imp | var)"
utmul = “Asụsụ (lang | lang-CO | -)”
utmwv = "UTM mbipute"
utmctm = paignkpụrụ Mgbasa Ozi (0 | 1)
utmcto = Oge Mgbasa Ozi
utmctr = Okwu Ochicho
utmccn = Aha Mgbasa Ozi
utmcmd = Mgbasa Ozi Mgbasa ozi (kpọmkwem), (organic), (ọ dịghị)
utmcsr = Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
utmcct = Ọdịnaya Mgbasa Ozi
utmcid = Nchịkọta Mgbasa Ozi
Amaghị m na otu di na nwunye ndị a… na amaghị m ma ọ bụrụ na ha nwere ndị ọzọ, mana ndị a bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị chọrọ anataghị ikike ọnụ gị onyonyo iji debanye aha data ọzọ na akaụntụ Google Analytics gị - dịka ọmụmaatụ maka ndị debanyere aha RSS gị!
Taa, m na-anwale echiche m… Na mepụtara ihe oyiyi arịrịọ na kwesịrị gafere ojiji RSS na Google Analytics. Ihe ịma aka n'ezie bụ, ebe ọ bụ na enweghị kuki ma ọ bụ ihe nchọpụta akọwapụtara. Onye debanyere aha nwere ike mepee otu nri ma denye otutu ihe na Google Analytics. M ga-aga n'ihu tweaking, n'agbanyeghị, wee hụ ma m nwere ike iweta ihe siri ike karị.
Nke a bụ ihe m oyiyi arịrịọ… M na-eji PostPost WordPress ngwa mgbakwunye M mepụtara na ịtụkwasị koodu mgbe ndepụta ọdịnaya:
Otu ndetu, nke a ga-atụle ọnụọgụ, ọ bụghị ndị debanyere aha! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ndị debanyere aha ha, m ga-akwado ihe omume onclick na akara ngosi RSS gị. N'ezie, na-atụ uche onye ọ bụla na-debanyere aha site na ozi njikọ njikọ gị na nkụnye eji isi mee… n'ihi ya, anaghị m eme ihe n'eziokwu. Ọ bụrụ n’inwere echiche ụfọdụ banyere ihe m na - eme ma ọ bụ otu a ga - esi meziwanye ya, gwa m!
Tags: effna -eji Pinterest eme ihemobile tinye-na-cart uduebipụta
Ị nweghị ike iji feedburner.com naanị? Ebe ọ bụ na Google zụtara ya stats ga-abụ na-integrated na Google Analytics mara mma n'oge adịghị anya… afọ a m na-atụ anya!
Ee, ana m eji Feedburner ugbu a tụọ ndepụta nri m ruru. Agbanyeghị, enweghị m mmasị na igbu oge mbipụta na Feedburner wee kpọọ nyocha dị na ya asị na otu o si egosipụta uto na ojiji.
Anụbeghị m na ha na-ele anya ịdọrọ na Feedburner stats na Google Analytics - mana nke ahụ ga-adị mma!
Debe m biputere!
Ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ GA na-etinye nke a n'ọdịnihu… naanị ezi uche ebe ọ bụ na Google nwere Feedburner… na enwere m obi ike na ị bụghị onye mbụ nwara nke a.
Nke a anaghị emebi usoro ojiji ọ ọ bụla? Ọ ga-amasị m ịchọpụta na amachibidoro m na Google Analytics site na iji sava ha n'ụzọ na-abụghị ọkọlọtọ (ya bụ site na arịrịọ Img).
Ọ bụrụkwa na ha agbanwee API ha (ntụgharị usoro nke parampat, ọnụọgụ nke parampat, wdg, ọ ga-agbaji nri)
Ọ ka mma iji okwu nnwale mee nke a!
Julaị 6, 2009, elekere 12:15 nke ehihie